by • • आवरण • Comments (0) • 1071
मानवजातिका रूपमा हाम्रो विगत जस्तै भविष्य पनि पृथ्वीको नाभीसँग जोडिएको छ । मान्छेको कथा भूगोलको अनुकूलन र बाध्यतालाई बुझेर र बुझन खोज्दै अगाडि बढिरहेको कथा हो । यसलाई नबुझे, हामीले के बुझने ? यसैले प्रश्नः
पृथ्वीका स्थलहरूको अक्षांश र देशान्तरले देखाउने निरपेक्ष अवस्थिति छ, तर त्योभन्दा पनि महत्वपूर्ण सापेक्षिक अवस्थिति हुन्छ । स्थलीय सम्बन्धहरूलाई विभिन्न तहमा (छिमेक, बस्ती, गाउँ, जिल्ला आदि) बुझने विधिहरू के हुन् ? हुम्लाको एउटा सुदूर गाउँमा बाटो पुग्ने वित्तिकै त्यसका सबै स्थलीय र आर्थिक–सामाजिक सम्बन्धहरू बदलिन्छन् अर्थात् निरपेक्ष अवस्थिति त्यही हुँदाहुँदै पनि सापेक्षिक अवस्थिति बदलिन्छ । बजार अब नजिक होला, स्वास्थ्य सेवा पहुँचमा पर्ला, स्थानीय उत्पादनको महत्व घट्ला, बढ्ला, जैविक विविधता माथि चाप बढ्ला । यी सबले त्यो बस्तीको संसारसँगको सम्बन्ध र संसारको त्यो बस्तीप्रतिको बुझइ नै फरक पर्छ । कालान्तरमा बासिन्दाहरूको मानसिक नक्शा नै बदलिन्छ । मानसिक नक्शाले स्थलपरक सम्बन्धहरू प्रभावित हुन्छन् र त्यो व्यवहारमा, लेनदेनमा देखिन जान्छ । सापेक्षमा कतिपय टाढा लाग्ने कुरा नजिक लाग्छन्, कति नजिकका टाढा हुन्छन् । हिजोसम्म जुन उत्पादनको सम्भावना थिएन, अब त्यो सम्भव हुन्छ । यातायातको विस्तारसँगै नेपालभर यो परिवर्तन भइरहेछ । विकासको एउटा महत्वपूर्ण पक्ष यसलाई बुझनु हो र यो बुझइलाई जनसाधारणको जीवनलाई सहज बनाउने काममा लगाउनु हो । ‘दूरीको घर्षण’ (फ्रिक्सन अफ डिस्ट्न्स) र त्यसमा आउने परिवर्तनको प्रभाव भूगोलको अध्ययनको प्रमुख पाटो मध्ये हो । ‘दूरीको घर्षण’ को समस्यासँग जुझने पनि आ–आफ्नै तरीका हुन्छन् । कर्णालीका कतिपय क्षेत्रमा नदी पारिकालाई विशेष कार्यमा निम्तो गर्न कार्य र निम्ताको तह अनुसार फरक–फरक बाजा बजाउने चलन थियो । त्यसो गर्दा निम्ता दिन जाने समयको बचत हुन्थ्यो ।
भूगोलको मुख्य ‘टुल’ वा उपकरण नक्शा हो । स्मार्ट फोन र गुगल नक्शाको सहज उपलब्धताले गर्दा अब नक्शा विशेषज्ञको मात्र उपकरण रहेन । तर नक्शाको प्रयोग गर्न र दैनिक जीवनमा सहयोगी तुल्याउन नक्शा पढ्न र आफ्नो आवश्यकता अनुसार प्रयोग गर्न जान्नुपर्छ । अब मुखले ठाउँ चिनाउने जमाना गयो । ठाउँ मात्र नभई त्यसको सन्दर्भ र क्षेत्र समेत गुगलले दिन्छ । नक्शा डाउनलोड गरेर फोनमा पठाइदिए पुग्छ । तर पनि आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गर्न सक्षम र उपलब्ध ज्ञानलाई आफ्नो अनुकूल बनाउन सक्ने ‘स्मार्ट’ मान्छे हुन भूगोलको साधारण ज्ञान भने नराखी हुँदैन । नक्शाले एक हेराइमै धेरै कुरा भन्छ र अझ् विषयगत नक्शाले विषयका विभिन्न पक्ष र अन्तर सम्बन्धको समेत सहज जानकारी दिन्छ ।
नेपालका प्राकृतिक स्रोत–साधनको सन्दर्भ, विशेषता, प्रयोग र व्यवस्थापनका समस्या र सम्भावना बुझन भूगोलले मद्दत गर्छ । हाम्रो प्राकृतिक वातावरणको संवेदना, विपत् र जोखिम जान्न र व्यवस्थापन गर्न भूगोलको ज्ञान आवश्यक छ । पहिले पहाडबाट तराई झ्र्ने जनसंख्या अहिले खाडी र मलेशियातिर लाग्दैछ । शहरतिर बसाइँसराइ बढ्दैछ । शहरीकरणको प्रभाव बुझन, प्रदूषणका अन्तर सम्बन्धबारे बुझेर निदानका उपाय खोज्न भूगोलको ज्ञान अपरिहार्य छ । हाम्रो जनसंख्याको विस्तार र बसाइँसराइको समस्या र पीर बुझन भूगोलले मद्दत गर्छ । हाम्रो जातीय र सांस्कृतिक विविधता बुझन र त्यसको सम्मान गर्न, विविधताले हामी कति धनी छौं भन्ने हेक्का राख्न र सामाजिक–आर्थिक–राजनीतिक अन्तर सम्बन्धलाई सुदृढ गर्न समेत भूगोलको जानकारी चाहिन्छ ।
अहिलेको संसारमा आफूलाई बुझेर मात्र पुग्दैन । अर्कालाई बुझनु त्यत्तिकै आवश्यक छ किनभने हामी आर्थिक सम्बन्धको जालोले जेलिएका छौं । पर्यटनकै कुरा गरौं । पर्यटक कहाँबाट आउँछन्, कस्तो भौगोलिक, सामाजिक र आर्थिक परिवेशबाट । के चाहन्छन् । उनीहरूलाई आकर्षित गर्न कस्तो व्यवस्थापन र कस्तो प्रकारको पर्यटन वस्तु (प्रडक्ट) चाहिन्छ । यो बुझइ विना पर्यटनको दिगो विकास कसरी होला ? विकासका हर क्षेत्रमा यस्ता प्रश्न आइरहन्छन् । ती प्रश्नको उत्तर खोज्न भूगोलको अध्ययनले मद्दत गर्छ ।
भूगोलले धेरैजसो ज्ञानका विधाहरूलाई जोड्छ । मान्छेका सबै विविधता र विशेषताहरू, उसका सबै क्रियाकलापको उद्गम, उद्भव, विकास, आरोह, अवरोह पृथ्वीमै हुने हो । यो धरतीसँग जोडिएर, यहाँको भौतिक र वातावरणको प्रयोग गरेर, प्रभाव पारेर र प्रभावित भएर मानव सभ्यताले फड्को मारेर यहाँसम्म पुगेको हो । मानवजातिका रूपमा हाम्रो विगत जस्तै हाम्रो भविष्य पनि कदाचित पृथ्वीको नाभीसँग जोडिएको छ । मान्छेको कथा भूगोलको अनुकूलन र बाध्यतालाई बुझेर र बुझन खोज्दै अगाडि बढिरहेको कथा हो । यसलाई बुझेर, हामीले के बुझने ?
यसैले प्रश्न ः भूगोल किन पढ्ने भन्ने हैन, भूगोल किन नपढ्ने ?
(शर्माले दुईदशक भन्दा बढी त्रिभुवन विश्वविद्यालय, कीर्तिपुरमा भूगोल पढाएका हुन् ।)